Ca 'Dei Frati I Frati Lugana 2019 - Wevino.store
Ca 'Dei Frati Ini Frati Lugana 2019
Ca 'dei Frati I Frati Lugana 2019
Inofungidzirwa kuve imwe yevanogadzira zvakanakisa muLugana vane nzvimbo yakakura yeminda yemizambiringa, Cà Dei Frati inogadzira huwandu nemhando yakasarudzika. Kwakadzika kwakadzika, maratidziro ekunakirwa kubva kuchena chena kusvika kumaruva maruva uye marimu.Straw yero, ine zvinonaka zvebharisamu mumhino, kuyeuchidza kwemaruva machena, apricot, uye almond. Chitsva uye chakafukidza pamukanwa, chinoratidzwa nehumwe hunhu uye hwakasarudzika acidity.
Mhando dzeMazambiringa: 100% Turbiana
Yakagadzirwa kubva nehunyanzvi yakasarudzwa Turbiana, iyo nharaunda autochthonous mazambiringa akasiyana par kugona, "Ini Frati" iwaini chena yakazvarwa kuti idhakwe mukati megore, asi yakaratidza kugona kuratidza kwayo yakanyanya kunaka mushure memakore mashoma apedza kukwegura mubhodhoro. Yenhoroondo Lugana, mumwe weavo vakachinja maonero echiratidzo mumakumi emakore apfuura.
Zvakare, se aperitif, inopera zvakanaka nechando kana tepid, asi isina kusimba, yekutanga, pamwe neyakavirirwa, yakakanyiwa kana yakakangwa hove mbale.
Mhuri yeDal Cero yakachinja ipapo Ca 'Dei Frati chivakwa, chiri kumahombekombe ekumaodzanyemba kweLake Garda, kuva chimiro chemuItaly chivharo mumakumi maviri emakore apfuura. Shure muna1987, vaive nemahekita gumi nemaviri emunda wemizambiringa, asi ikozvino, zvichitevera kutengwa kwechunk hombe remunda wemizambiringa muna 12, vane anopfuura mahekita 2008. Kuwedzera kwafanana nekuwedzera uku muhuwandu, uye nanhasi vanoramba vari ivo vanogadzira zvakanaka muLugana.
Chakavanzika chekubudirira kwewaini yeCà Dei Frati iwo akasvinwa emizambiringa. Vazhinji vagadziri munzvimbo yakatarisana uye vanodzidzisa mizambiringa yakakwira. PaCà Dei Frati, mizambiringa inodzidziswa yakaderera, pane imwe kana kaviri Guyot, minda mitsva yemichero ine huwandu hwekudyara hwakanyanya, uye goho riri pasi pazere pakati penzvimbo yacho. Iwaini iyi inogadzirwa kubva pamazambiringa akakura pamazambiringa gumi kusvika makumi matatu nemashanu. MuLugana, muzambiringa weTurbiana wakasimwa pamhepo yakasvibira ichangobva kumaodzanyemba kweLake Garda. Mazuva anodziya anopa mavheji ane uremu hwakawanda uye kuwedzera simba kupfuura iwo kubva pamakumi matanhatu emakiromita kumabvazuva. Husiku hunotonhora, nekuda kwekumanikidza kushandura kweLake Garda, inova nechokwadi kuti mazambiringa anoramba anonhuwirira uye acidity.